Ukwahlula kwedatha kwenziwa lula ngo-Semalt
I-Web scraping iye yaba yinkqubo ebalulekileyo yedijithali kwisicwangciso soshishino kunye nokuthengisa. Namhlanje amashishini afuna ukuqokelela idatha ngaphakathi kwemizuzu kwaye azame ukufumana iindlela ezifanelekileyo kakhulu zokufezekisa iinjongo zabo. Ukwandiswa kweWebhu kwiSikrosi isisombululo esihle kwaye unikezela abasebenzisi bayo izixhobo ezimangalisayo kunye neziphumo. Abasebenzisi akudingeki ukuba babe nezakhono zeprogram ezikhethekileyo zokusebenzisa le projekthi yesofthiwe.
I-Web Scraper Extension
Xa abasebenzisi bewebhu basebenzisa esi sixhobo bangazakhela iipasimenti ukuze bakwazi ukuhamba ngesayithi kunye nedatha yentsapho.Ngokusebenzisa abakhethiweyo abahlukeneyo, i-23 (web) ye-web scraper iyakwazi ukuhamba ngewebhusayithi ukufumana idatha, njengoluhlu, imifanekiso, imixholo kunye neetafile. Ngokukodwa, rhoqo xa i-scraper ivula iphepha kwi-website, abasebenzisi kufuneka baqoke ezinye izinto. Ukuze wenze njalo, kufuneka bacofe kwi-sitemap ngokukhetha 'Scrape'. Xa befuna ukuyeka inkqubo phakathi kwabo, kufuneka bavale le festile, kwaye banokugcina idatha ekhishiwe. Emva koko, idatha echanekileyo ingathunyelwa ngaphandle njengefomathi ze-CSV.
Le idrafta yedatha r ilula kakhulu, isebenza kakuhle kwaye ichaneka. Inika inzuzo ethile, njengokwedatha kwedata ekwazi ukufunda izakhiwo zedatha, njengoluhlu lwezonxibelelwano, amanani, iimveliso, ii-imeyile kunye nokuzenzekelayo ngokuzenzekelayo.
Ukukhangela Amaphepha amaninzi usebenzisa Ukucwangcisa
Cwangcisa izinikelo ngamanyathelo amakhulu abasebenzisi ukuba bakwazi ukusingatha indlela efanelekileyo ngayo idatha abaye bayibamba. Ukukhipha ulwazi kumaphepha amaninzi ewebhu, siya kusebenzisa inyathelo elibini:
Okokuqala, siya kufumana onke ama-URL kumakhasi ewebhu kunye nokwandiswa , ngoko siza kucokisa ulwazi oluvela kula maphepha ewebhu usebenzisa uCwengisise. Ukuba amaphepha ewebhu afuna ukuqokelela idatha ekunikezeni izixhumanisi kwamanye amaphepha afanayo, abaphandi bewebhu bangasebenzisa i-pagination ukulandela ukuya kwiphepha elilandelayo. Abasebenzisi banokudibanisa ezinye izicwangciso zokukwazi ukuguqula nokukhwela kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo. Ngokomzekelo, banokuvelisa uluhlu lwee-URL ukuze bahlaziye baze bazifake ngeziganeko Source .